पोर्चुगलमा नेपाली युवाले गरे आत्महत्या : को हुन् उनी ? | शुभयुग
पोर्चुगलमा नेपाली युवाले गरे आत्महत्या : को हुन् उनी ?
एजेन्सीप्रकाशित मिति: २०७८ माघ १४, शुक्रबार (५ महिना अघि)
६०५ पाठक संख्या
पोर्चुगल – युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा एक नेपाली युवकले आत्महत्या गरेका छन् ।
विगत तीन वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका घर भएका ३८ वर्षीय तर्कराज भट्टले बिहीबार रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । उनलाई बस्ने घरभन्दा केही परको स्थानमा गएर रुखमा डोरी लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले भेटेको थियो ।
भट्ट पोर्चुगलको आल्बुफेइरामा बस्दै आएका थिए । उनी सोही क्षेत्रमा एउटा कृषि फार्ममा काम गर्थे । उनको शवलाई प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि स्थानीय अस्पतालमा राखेको गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका महासचिव राजकुमार थापाले जानकारी दिए ।